EZONA NDAWO ZIBALASELEYO ZIKABRAD PITT KUNYE NEENWELE (2021 HLAZIYA) - IINWELE ZAMADODA
UBrad Pitt iinwele
Eyona Iinwele Zamadoda UBrad Pitt iinwele
I-haircut kaBrad Pitt kudala yafaniswa nembonakalo entle ekhethekileyo kunye nezitayile ezipholileyo. Nokuba uPitt ulolonga ixesha elide okanye elifutshane, iinwele ezichetyiweyo okanye abasebenzi abasikiweyo, okanye…
I-haircut kaBrad Pitt kudala yafaniswa nembonakalo entle ekhethekileyo kunye nezitayile ezipholileyo. Nokuba uPitt wenza isitayile esineenwele ezinde okanye ezimfutshane, intloko echetyiweyo okanye abasebenzi abasikiweyo, okanye intle nje etyibilikayo, uthathwa njengomnye wosaziwayo oshushu e-Hollywood. Kodwa udumo lukaPitt alugxili nje ekujikelezeni iinwele zakhe ezingqindilili, ezimhlophe kunye neenwele ezithandwayo, zangoku.
Isibini esitshatileyo esitshatileyo, abantwana abathandathu, uqhawulo mtshato oludumileyo, kunye nendima yeembonakalo kamva, uBrad Pitt usathathwa njengenye yeenkwenkwezi ezingamadoda eziphumeleleyo kwishishini lokwenziwa kweefilimu. Emva kwamashumi amathathu eminyaka kwindawo ebonakalayo kunye neemovie ezininzi, uPitt uzamile malunga nazo zonke iinwele ezincwadini. Kwaye ngeenwele ezithe tye ngokwemvelo, ezingqindilili, akazange abe nengxaki yokutsala naziphi na ezona zitayile zilungileyo.
Phakathi kweenwele zakhe Ubushushu , Iklabhu yokulwa , Basterds yokutya , kunye UTroy , nantsi yonke into ofuna ukuyifumana malunga neenwele zeBrad Pitt!
1Izitayile zeBrad Pitt
MbiniUBrad Pitt iinwele ezinde
3UBrad Pitt iinwele ezimfutshane
4UBrad Pitt Buzz Sika
5UBrad Pitt Crew Sika
6UBrad Pitt Umsindo weenwele
7UBrad Pitt Pompadour
8UBrad Pitt ndevu
9Ungazifumana njani iinwele zikaBrad Pitt
9.1Ixesha elide eliPrintiweyo eliBuyileyo + Ibhokhwe
9.2I-Undercut + Inwele eziKhehliweyo eziMva
9.3Amacala aPhezulu oPhezulu + aCociweyo
9.4Iinwele ezimfutshane ezifakwe iinwele + iiSide eziCwecwe + iibhokhwe
9.5Ikama elide ngaphaya kweeside ezimfutshane + iindevu
9.6Iinwele ezinde ezimdaka + iindevu
Izitayile zeBrad Pitt
Izinwele zikaBrad Pitt zidlulile kwiinguqu ezininzi kule minyaka idlulileyo. Oku kokunye ukusikwa kunye nezimbo ezaziwa kakhulu ngaye.
UBrad Pitt iinwele ezinde
UPitt waziwa kakhulu ngeenwele zakhe ezinde, kunye namadoda amaninzi azama ukuphinda isitayile esimahla kunye ne-handsome, engakhathaliyo ehamba kunye nayo. Ubenxibe kakhulu oku kunqunyulwa kwi-2000's emva kokuyeka iinwele zakhe ezimfutshane zikhule kwaye emva koko wazigcina zikhutshiwe kwaye zidityaniswe neendevu, ezenza ukubukeka kwendalo.
Oku kwakujikeleze ixesha elifanayo xa abafazi bethandana noPitt's UTroy iinwele.
iinwele ezinde emagxeni amadoda
Ngelixa uninzi lwabafana lungenazo iinwele ezigudileyo, ezinamaqhekeza, iinwele ezinde zikaPitt zisenokufezekiswa ngokuvumela iinwele zakho zikhule ziye emagxeni, emva koko zisebenzise i-wax ekhanyayo okanye udongwe ukwenza indawo embindileyo enombala eqhubeka ngokwendalo. Qiniseka ukuba uyayifaka imveliso kwezinye iingcebiso ngapha nangapha ukunciphisa i-frizz.
Ekugqibeleni, uPitt oneenwele ezinde yimbonakalo ephumeleleyo. Sebenzisa i-shampoo esemgangathweni kunye nesilungisi, phila impilo esempilweni ukwandisa ukukhula kweenwele, kwaye vumela iinwele zakho zikhule ixesha elide ngokwendalo.
UBrad Pitt iinwele ezimfutshane
Ngokulinganayo nefashoni kunye nobudoda, iinwele ezimfutshane zikaPitt ziye zaqala ukusikwa kwe-buzz ukuya kwi-crew cut to back slicked back. Xa uPitt eqala ukuphakama ukuba adume kwiminyaka ye-90, wanyikima iintlobo ezahlukeneyo zeenwele ezimfutshane kwaye kwakusafuneka avumele iinwele zakhe ukuba zikhule zibe ngumbonakalo wakhe ongahlambulukanga, oneenwele ezinde.
Umzekelo, ngexesha lendima yakhe edumileyo kwi Iklabhu yokulwa , Iinwele zikaPitt zachetywa kwisitayela esifutshane, esine spiked esincedisa ubuhle bakhe obupholileyo kakhulu. Izinwele ezicocekileyo zinokugcina ukubonakala kwakho ziqhelekileyo kodwa zinesitayile, kwaye zinokufezekiswa ngokulula ngokusebenzisa imveliso yokukhanya ekhanyayo yokugqitywa kombala.
Isitshixo soninzi lweenwele ezimfutshane kukukhetha ukuphela okanye ukusika emacaleni. Amacala amafutshane ahlukileyo enza ukuba iinwele zakho phezulu zime ngaphandle.
UBrad Pitt Buzz Sika
Ukunqunyulwa kwe-buzz kaBrad Pitt yayiyimbonakalo yobukeka obuhle. Ukudlala indima kwindima yakhe eyaziwayo kunye nomfazi wexesha elizayo u-Angelina Jolie kwi Mnu & Nksz Smith , UPitt wanxiba elula ukusikwa kwe-buzz ukuveza isimilo sakhe esifihlakeleyo kwifilimu. Ukuba unobuso besikwere okanye bomelele, amanqaku abukhali, ukusikwa kwe-buzz kubonelela ngenkangeleko entle.
ukuhambelana kwenyanga ye-capricorn
Le inwele icacile njengokuba ifika kwaye ifuna ukugcinwa kancinci, gcina ukubanjwa ngamanye amaxesha. Mane ucele umchebi wakho ukuba achebe intloko yakho ukusika okufutshane kakhulu okanye usebenzise izixhobo zokucheba iinwele ukunciphisa iinwele zakho. Sincoma ukusebenzisa # 1 umlindi wokuqhafaza ukusikwa okusondeleyo.
UBrad Pitt Crew Sika
Xa uPitt waphinda wafutshane kwakhona, wanyikimisa i-classic crew cut, eyaziwa ngokwenza i-cut-cut cut and simple aesthetic. Iinwele zikaPitt zazibethelwa emacaleni nasemva, ngelixa iinwele zaya zisiba nde ngaphezulu entlokweni yakhe.
Ungafumana abasebenzi bakaPitt banciphise ngokucela ukuba umchebi wakho asike zonke iinwele zakho ezimfutshane kunye neziqhiki, uqiniseke ukuba imigca ejikeleze ibunzi lakho imile ngokulinganayo kwaye ijikeleze kakuhle. Ngokufanayo, unokucela ifayile ye- ulusu oluphezulu luphela emacaleni nge-intshi ezi-1 ukuya kwezi-2 zeenwele ezishiyekileyo ngaphezulu.
iinwele ezigobileyo zamadoda
Kwaye kwizinwele ezingaphezulu, cinga ukugcina iinwele ngaphezulu kancinci kwaye utshayela umphetho ecaleni. Ngale ndlela, ungabeka isitayile nokuba sesiphi isityalo esinombala okanye Inwele ye-Ivy League , zombini ezi zinto ziye zaduma kwiminyaka yakutshanje.
UBrad Pitt Umsindo weenwele
U-Brad Pitt's Fury haircut lolunye uhlobo lwesitayile abafana abalingisileyo. Kwimuvi, uPitt wayenxibe iklasikhi ebuyileyo ebukeka umva.
Ngamacala achetyiweyo kunye neenwele ezinde ezibuyiswe ngaphezulu, imbonakalo yala maxesha iphezulu edlalwayo kumacala amafutshane, izitayile ezide eziphezulu.
UBrad Pitt Pompadour
Ngenxa yokuguquguquka kweenwele ezisemva zikaPitt, yayi ngeli xesha apho umdlali weqonga ngamanye amaxesha wayebizwa ngokuba yipompadour. Kodwa endaweni yenguqulo yeklasikhi enombhobho omkhulu ngaphambili, i-celeb ikhethe ubungangamsha obufutshane obunokuphela okuphezulu.
UBrad Pitt ndevu
Ngelixa inani elifanelekileyo leendlela zakhe zidityaniswe nobuso obucocekileyo, iindevu zikaBrad Pitt nazo ziyenye yezona zibalaseleyo eHollywood.
Nokuba uchebe iindiza ezimfutshane okanye uthathe isigqibo sokukhulisa intshebe epheleleyo, uPitt ubelumkile ngokusebenzisa indibaniselwano yeenwele zobuso ukugcwalisa iinwele zakhe.
Ungazifumana njani iinwele zikaBrad Pitt
Ngaphandle kwempumelelo enkulu yebhokisi kaPitt kunye nobomi bobuqu esidlangalaleni kule minyaka idlulileyo, iinwele zakhe eziguquguqukayo kunye nokubonakala kwesitayile kuye kwaba zezona zixhobo zakhe zinkulu. Ukuba ucinga malunga nokucheba iinwele ezintsha kulo nyaka, sebenzisa le mizekelo ingasentla njengempembelelo ngaphambi kotyelelo lwakho olulandelayo kwindawo yokucheba iinwele. Kwaye emva kokuba usike kakuhle, ungakulibali ukubaluleka kokufaka umgangatho we-pomade, i-wax, okanye udongwe kwisitayile sokubonakala okufunayo.
Ixesha elide eliPrintiweyo eliBuyileyo + Ibhokhwe
I-Undercut + Inwele eziKhehliweyo eziMva
iinwele ezipholileyo zamakhwenkwe
Amacala aphezulu e-Messy + aMacwecwe acocekileyo
Iinwele ezimfutshane ezifakwe iinwele + iiSide eziCwecwe + zebhokhwe
Ikama elide ngaphaya kweeside ezimfutshane + iindevu
Iinwele ezinde ezimdaka + iindevu
iinwele ezimfutshane ezineendevu